Tantara: Teraka tao An-tranon’omby i Jesosy - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
FANTATRAO ve hoe iza io zazakely io? Eny, io no Jesosy. Vao teraka tao amin’ny tranon’omby iray izy. Ny tranon’omby dia toerana fametraham-biby. Teo amin’ny ﬁhinanam-bilona, dia toerana fasian-tsakafo mba hohanin’ny ampondra sy ny biby hafa, no niterahan’i Maria an’i Jesosy. Nefa nahoana moa i Maria sy Josefa no eto miaraka amin’ny biby? Tsy toerana natao hiterahan-jaza io, sa tsy izany?
Tsy izany tokoa. Nefa izao no antony naha-eto azy: Ny mpanapaka an’i Roma, i Aogosto Kaisara, dia nanao lalàna iray fa tokony hiverina any amin’ny tanàna nahaterahany ny tsirairay mba hanoratana ny anarany ao amin’ny boky. Eny, i Josefa anefa dia teraka tany Betlehema. Nefa rehefa tonga izy sy Maria, dia tsy nisy eﬁtrano ho azy ireo na taiza na taiza. Koa tsy maintsy nanketo izy niaraka tamin’ny biby. Ary tamin’iny andro iny ihany i Maria dia niteraka an’i Jesosy! Nefa araka ny azonao jerena, dia ara-dalàna ny zaza.
Eny, noraisin’i Jehovah ny ﬁainan’ny Zanany avy any an-danitra ary napetrany tao an-kibon’i Maria. Avy hatrany dia nanomboka nitombo tao am-bohokany ny zaza iray tahaka ny ﬁtombon’ny zaza hafa ao an-kibon-dreniny. Nefa io zaza io dia Zanak’Andriamanitra. Farany dia teraka teto amin’ity tranon’omby any Betlehema ity i Jesosy. Hitanao ve izao hoe nahoana ireo anjely no faly erỳ afaka nanambara tamin’ny olona fa teraka i Jesosy?
Inona no anjara asan’i Aogosto Kaisara, tamin’ny fanatanterahana ny faminaniana momba ny fahaterahan’i Jesosy? (Lioka 2:1-4; Mika 5:2)